Iphupha malunga noQeqesho Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngokungafaniyo nomgaqo ongaphantsi, i-S-Bahn ayibaleki kuphela ngaphakathi esixekweni, kodwa ikwadibanisa izixeko kunye. Oku kubenza babe yinto ekhethekileyo xa kuthelekiswa nothungelwano lwezothutho olwenziwe ngeebhasi kunye neetram, kunye nokuhamba umgama omde.
Kuba i-S-Bahn ibaleka kumgaqo wayo woololiwe, ikhawuleza kakhulu kunothutho loluntu lwasezidolophini, ekufuneka ivumelane nokuhamba okuqhelekileyo esixekweni okubandakanya abahamba ngeenyawo, abakhweli beebhayisikile nabaqhubi. Oku kuyenza inomdla ngakumbi kubahambi. Ngaphandle kweeyure zokubaleka, nangona kunjalo, izitishi ze-S-Bahn zihlala zithintelwa njengoko zihlala ziyindawo yoqhakamshelwano kuzo zonke iintlobo zolwaphulo-mthetho.
Ukuba uphupha nge-S-Bahn, mhlawumbi uya kufuna ukuyithatha uhambe nayo. Kodwa mhlawumbi ulinde umntu oza nezi ndlela zothutho kwaye ulinde yena ngokukodwa. Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukuba kwenzeka ntoni kanye ngokunxulumene nesimboli yephupha. Ngaba uyayiphosa i-S-Bahn ephupheni lakho, okanye uyayibamba nje?
Kwisicatshulwa esilandelayo uya kufunda yonke into oyifunayo malunga neendlela zothutho kunye nentsingiselo yalo yephupha:
1 Uphawu lwephupha «S-Bahn»: awona maphupha aqhelekileyo malunga neesimboli
1.1 Ukuhamba nge-S-Bahn kwihlabathi liphupha
2 Uphawu lwephupha «S-Bahn» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «S-Bahn» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «S-Bahn» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «S-Bahn»: awona maphupha aqhelekileyo malunga neesimboli
Ukuhamba nge-S-Bahn kwihlabathi liphupha
Ukuba iphupha lihamba kwi-S-Bahn ngelixa ulele, ke oku kuyabonisa ukuba ungathanda ukuya phambili ebomini bakho. Ubuntu bokulala buhlala buvela, kodwa isidingo sempumelelo kunye nokwahluka kukhulu. Ukuba uhamba kwi-tram ehamba kakuhle, izicwangciso zakho zinokuphumelela kwaye uya kufezekisa iinjongo zakho.
Ukuba umntu oleleyo usebenzisa uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu ephupheni, nelawula ngaphandle kwendlela, lo mfanekiso uphuphayo ungaqhelekanga ubonakalisa inkxalabo yomntu. Iindaba ezimnandi: intlungu ekugqibeleni ayinasiseko.
Uphawu lwephupha «S-Bahn» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu "S-Bahn" lwephupha lithetha lukhulu kutoliko lwamaphupha ngobuntu bephupha kunye nokukhula kwalo. Ephupheni imiboniso yakhe Isimo sengqondo malunga nesiqu sakho umzekelo, kwinkangeleko yezixhobo zokuhamba:
Ngakumbi uloliwe okanye itreyini, kokuncinci kwaye kubaluleke ngakumbi ukuba uziqwalasele. Ukuziphatha kwentlalo yomphuphi kunye nendlela yakhe yokuqhubana nabanye abantu ikwabonakaliswa kwisimboli yephupha. Ukufika kwi-S-Bahn ngexesha kubonisa ephupheni ukuba uya kufezekisa iinjongo zakho kuba ulungelelanisa ngempumelelo iimeko zangaphandle kunye neemfuno nobuntu bakho.
Ukuba ufike emva kwexesha, kwelinye icala, i-S-Bahn imele ukutolikwa kwamaphupha. ndiphoswe ngamathuba. Ukuba wehla ngaphambi kwexesha ephupheni njengomgibeli, uloyiko lwempumelelo yakho lubonakaliswa kwisimboli yephupha. Ngokunokwenzeka iphupha eloyikela ukuba nokulindela okuphezulu kunokuvela kulo.
Ukuba ushiya i-S-Bahn ngaphambi kokuhamba, ngokuqinisekileyo usifumene isisombululo esingcono kunangaphambili sengxaki ethile.
Uphawu lwephupha «S-Bahn» - ukutolikwa kwengqondo
I-S-Bahn ihlala imela isimboli yamaphupha ezesondo ngokuchazwa kwephupha. Ngokukodwa, xa uloliwe engena okanye ephuma kwitonela ephupheni, bayabonakala kuwo. iminqweno yesiniinokungahoywa okanye icinezelwe kubomi bokwenyani.
Ukuhla kuloliwe waselunxwemeni ngaphambi kokufika kwindawo esiya kuyo kubandakanya uloyiko lokuphuma ngaphambi kwexesha kutoliko lwamaphupha kwaye luphawu ukungakwazi ukuzeyisa. Ukuba uloliwe uyalahleka ephupheni, uphawu lwephupha lubonisa iintshukumo ezingafanelekanga. Ngokunokwenzeka i-subconscious yazisa ukuphupha ukuba yenze into okanye inenjongo yokwenza into eyalayo.
Ngamanye amaxesha i-psyche iyazikhusela ephupheni ngokuchasene nefuthe labanye abantu. Le mvukelo ibonakala kwisimboli yamaphupha xa uphupha ukuba uku-S-Bahn ngokuchasene nentando yakho kwaye uzama ukuphuma.
Ukuba iphupha likhokelela kwisikhululo sikaloliwe, oku kuthetha into ngomnqweno ekutolikweni kwephupha. ezahlukeneyo y utshintsho ngaphandle kwe. Ngokuqinisekileyo umntu ugqibe ngokungazi ngenqanaba elinye lobomi kwaye ngoku ufuna ukukhula kwelinye icala. Amaqabane amaninzi okuhamba afunyenwe kwisimboli yamaphupha "S-Bahn" abonakalisiwe ekutolikeni iphupha, kunye nokuhlala kunye nengqondo evulekileyo yephupha.
Uphawu lwephupha «S-Bahn» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha "S-Bahn" lumele ubomi bephupha kwinqanaba lokomoya. Isenokuba yi Umgama othile yenza ekukhuleni ngokomoya.
I-S-Bahn ibalasele ephupheni, nangona kunjalo, ikwazimisela kunye nokuqina apho iphupha lilandela umkhondo elalikhe lawuthatha.